Efa vonona handray an’ i Dada ny miaramila. – MyDago.com aime Madagascar
Miova isanandro ny toe-draharaha politika eto amintsika, toerana itovozana’ireo vahoaka vaovao I Magro, rehefa giazan’ny FAT ny Rnm sy ny Tvm, koa tsy hatao tompon-trano mihono ianareo fa entinay ireto ny tatitry ny kabary heno teny an-toerana androany:
Ignace : tokony ho feno isanandro ity kianja ity. Ianareo ao anatin’io governemanta tsy mahomby io indray ve no manome ultimatum ho an’ ny Sadc ? isaorana ihany ianareo entité 6 namoaka ireny fanambarana ireny kanefa na izany aza tsyampy iray izany dia ny fialan’I Andry Rajoelina.
Manoela : manomboka ny fampihavanam-pirenena ary ny mafy vava indrindra no nitondra teny. Aiza amin’izany ireo teo akaiky i Dada mampadika ?
Ronstant : Miomana ny rehetra fa ho avy ny zazalahy. Maika halevona ny FAT ka manome ultimatum ho an’ny Sadc. Izy alevona indray ity no miantso mpandevona ary tsy mbola nisy zavatra marina na tanateraka notenenin’ny FAT na iray aza.
Mektoub : miteny ny baromètre politika ka ireo mpisolelaka fantratra no lasa mamalan-kira. Mila mailo anefa isika manoloana izany satria ny ahiahy tsy ihavanana. Tandremo ireo mitovy akanjo amintsika milaza fa zanak’i Dada nefa tsy izy akory ; io fangatahana daty io sao dia fanomanana milisy ? Tandremo fa teknisiana daholo no nampetrak’i Radidy, Zafy ary Ravalomanana dia avy eo fanipazana hoditr’akondro no natao. Enga anie ho diso ny heritreritro.
Mamitiana : aleo manomboka androany dia ho kabarim-pandresena no atao. Ady amin’ny tsy rariny no ataontsika ary tsara hatrany ny vokatra. Aleo koa mba hotsimbinina ny lavitra dia amin’ny 4 ora sy sasany no mirava ny hetsika andavanandro.
Christian Tabera : tsy anjaran’ ny FAT no mametraka daty na mampitahotra ny SADC . Henon’ny olona ny hiakiakantsika sy ny vahoaka malagasy ary mahatsapa ny maro fa tsy misy afa-tsy ny fiverenan’ireo filoha roalahy indrindra fa i Dada no vahaolana, ary efa mazava ny tenin’i Pr Zafy ka tokonyatosika ny TSAR.
Guy Maxime sy Edouard : efa niova ny vorondolo, lasa voromanga. Ny bitro voalavo sisa no mila alevina.
Isaky ny mivoaka i Bary Rafatrolaza dia miteny fa izahay dia zanak’i Dada ary Dada ihany, rehefa milaza anefa ny olona hoe iraho dia aleo amin’ny manaraka hoy izy. Manefy ny fotoana ary zatra lalan-dririnina ny mpanao politika ka manao hitsin-dalana foana. Alefa retraite daholo ny goaika antitra politika rehetra ary Dada no manome ronono azy ireo. Teneninay amin’ny fomba ofisialy fa efa vonona handray any i Dada ny miaramila.
Tabera : aza miheritreritra hisy Andry Rajoelina intsony ao anaty feuille de route fa bye bye lery. Izany no tenin’izao tontolo izao noho ny antso teto Madagasikara. Ny toerana handehany no ifandinihina. Ary izy na miala na migadra. Rahampitso no ho avy ny delegasion’ny Troika. Iza no diso ny SADC ve sa i Andry ?
Rodin : efa nisaotra ireo “entités6” ireo ny Filoha Ravalomanana tamin’ny sabotsy fa hafa iry Naivo Raholdina hanao “session extraordinaire” hafa indray, ny vahoaka anefa efa mandady.
Nomen’i Ravalomanana hivorin’ny vahoaka ao Mahajanga ny magro mba tsy any anaty manga intsony no mivory.
Auteur Solo Razafy*Publié le 25 août 2011 25 août 2011 Catégories Politique
7 pensées sur “Efa vonona handray an’ i Dada ny miaramila.”
Tokony mba hasiana fandiniana akaiky ihany ny kabarin’i Mektoub teo fa sao dia mba izany tokoa.
Mila mailo foana isika e! ataoko fa efa misy tompon’andraikitra ny @ ‘izany fa tsy avela handalo
fotsiny ireny zavatra voalaza ireny sady manan-danja tokoa satria olondia no mifanatrika amintsika, sady voakarama .
Bizina ny andry zareo ka tsy maintsy mitady hirika ry mpikarama n’ady isany .Sady ady farany io,aleo isika tsy ho faly
fotsiny fa tena handray nadraikitra tokoa ny tsirairay @’io fotoan-dehibe io.
26 août 2011 à 6 h 16 min
Miaramila tsy misy an’i Ndrianarijaona zany?
Fa inon’ity directoire militaire matoritory ao an-kibon’i André Ndrianarijaona ity aloha é!
Miaramila mitàna ny neutralité no avela hitsangana, fa ireo lohandohan’ny mpisorona loha-toaka sy ny 3V rehetra, tsy azo atokisana.
Vonona @ ahoana moa ary vonona @ny inona ny miaramila? so sanatria ka vonona handray an’i DADA @ basy? Tsy azo antoka ireo, mailo hatrany hoaho isika fa DADA VELONA no ilaintsika.
Ary iza koa moa no mahalala iretsy foza niova hevitra retsy, satria efa fika lany andro ny bomba sy ny karazany de mamorona stratezia vaovao indray ry zareo? Ahiahy ny ahy iny ka samia manidinika sy mitsakotsako.
Tokony ho havahana tsara ireo miaramila satria raha ny Miaramilan’i domelina dia efa Mpikarama
an’ady ,sady tsy misy hankatoa an’ireny eo!indrindra ireo izay nampijaly ny vahoaka @ halatra sy
ny fandrobana,ny horohoro isan-karazany,atao ahoana no ahatoky an’ireny intsony??? sady marina ve fa tena fitiavany
an’i Dada no hitsenany azy??? hidiana aiza koa i Domelina ?domelina misafidy na any TSIAFAHY na any @ 18,tsy 18e
any Paris io fa 18 eny ANJANAMASINA ry zareo a!
Dia aza mitsahatra mivavaka tompoko isany o!izao vao tena hilaina ny hery masina fa ady ity hoy i RAINIMANONJA.
Ireo foza niova ireo dia mazava ny azy fa mbola fitiavan-tena ,mihevitra izy ireo fa mbola hanoy ny FAMADIANA hatrany!
tanana zatra mitsotra ireny……….!koditra aho vao nahita ilay anarana fotsiny » VONINAHITSY ».IO no mahatonga ny olana
lava eto @’io fisandohany etsy sy eroa io ,avy eo rehefa tratra izy dia hailika @ mpitondra fa GADRA POLITIKA ,nefa
mpanao politika MIGADRA,dia io no hararaotin’ny mpanongam-panjakana lava eto ( anisany izany e!).
Que les foza soient « vonona » ou non :
==> on s’en tape royalement
Monsieur le Président : RENTREZ !
Sans prévenir les foza.
je suis persuadée que le peuple se fera une obligation de VOUS PROTEGER
Il n’a plus les moyens d’être tétanisé et snobbé comme en 2009.
Madagascar est un grand territoire incontrolable de surcroit (par hélico dans une propriété américaine par exemple ? ? ?
Vous représentez le seul espoir dans le naufrage du pays actuel.
Raha zany miaramila vonona handray an’i dada zany aloha dia zao no tsarovy:RAHA ZA
Raha zany miaramila vonona handray an’i dada zany aloha dia zao no tsarovy:RAHA ZANY NO MISY DIA ROMBO NO ETO,ka samy voa daholo anie sika e!fa reo MPAMPIADY efa tafatsoaka daholo.DIA LASA PILLAGE BE NDRAY NO MISY?DIA IZA NO HOSOKETANA EO?TSY MAINTSY DADA IHANY SATRIA TSIKA MPOMBA AZY NO MANAO NY HETSIKA;aleo aloha hisaina kely aho ry reto a!
Précédent Article précédent : Bye bye Andry Rajoelina !
Suivant Article suivant : La HAT de Rajoelina vomie, des confusions partout !